Shiinaha BD1AE Mashiinka Mashiinka Cusbooneysiinta Dabaqa | Jinqiu
Shayga No. BD1AE
Danab / Joogtayn 220V / 50Hz
Dhexroorka saxanka salka 432mm
Miisaanka guud 72.2kg
Miisaanka birta miisaanka 1X12.8kg
Cabirka xirmooyinka jirka ee ugu weyn 535X435X375mm
Dhagaxu waa shey aad u qaas ah oo sameeya raaxo lagu daro dhisme kasta, ma aha oo kaliya xoog iyo adag laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay midabyo iyo qaabab kala duwan. Sidaa darteed hudheelada, suuqyada, gegooyinka diyaaradaha, saldhigyada guryaha aadka u sarreeya iyo wixii la mid ah waxay u isticmaali doonaan dhagax dabiici ah qurxinta dhulka, waxayna u isticmaali doonaan dhowr dhagax oo kala duwan isla aaggaas. In kasta oo dhagaxu uu yahay mid adag oo waara, hadana wali waxaa dhaawici doona cimilada iyo taraafikada oo wuxuu lumin doonaa qiimihiisa. Haddii la beddelo, ma aha oo kaliya kharash ka badan laakiin sidoo kale waxay saameyn doontaa shaqada caadiga ah iyo nolosha. Sidaa darteed, waxaa fiican in la cusbooneysiiyo.
Mashiinka cusbooneysiinta dabaqa ayaa loogu talagalay dib-u-cusbooneysiinta, oo ah mashiin dhinacyo badan leh oo shiidi kara, xoqin kara, wax ka saari kara, cusbooneysiin kara oo u dhigi kara mashiinka si dhakhso leh hal mashiin. Miisaanka ayaa ku filan, wuxuu u isticmaali karaa dabaq dhagax adag oo kala duwan, xawaare hooseeya wuxuu u baahan yahay inuu hagaajiyo shiidi iyo waxtarka qummanaanta. Naqshadeynta bini-aadamka, aaladda korantada hore ee korontada qaadata, mishiinka gadaal ka taagan ee qalabka toosinta ah wuxuu ka dhigayaa burush kasta dhulka wax shiidaya oo sahlan in la shaqeeyo. Nidaamka cusbooneysiinta wuxuu keydinayaa in kabadan 80% kharashka dib-u-iibinta, wuu shaqeyn karaa habeenkii, saameyn kuma yeelan karo waqtiga mashquulka caadiga ah.
Mashiinka lagu cusbooneysiiyo sagxadda ee leh kiimikada, ayaa ah kan ugu horreeya ee loo xusho xoqidda dhulka.
Hore: BD3A Mashiinka cadayashada ee badan
Xiga: Mashiinka Cusbooneysiinta BD2AE-Floor
70L / 80L Nadiifiye iyo Vacuum Nadiifi oo qallaji leh iskab ...